Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Tifitra nitifitra an'i YVR. Novonoina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver any BC, Kanada
YVR, seranam-piaramanidina iraisampirenena ho an'i Vancouver, Kanada dia niharan'ny fanidiana taorian'ny fifampitifirana nahafaty ny alahady teo.
Lehilahy iray no maty voatifitra ary novonoina tany ivelan'ny vavahady lehibe tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Vancouver any Richmond, BC Alahady tolakandro.
BC Emergency Health Services dia nilaza fa ny mpamonjy voina bisikileta teny amin'ny seranam-piaramanidina dia namaly ny zava-niseho talohan'ny 3 hariva
Fiara mpamonjy voina roa ihany koa no nalefa tany amin'ny seranam-piaramanidina taorian'ny fitifirana, saingy tsy nisy naiditra hopitaly, raha ny filazan'ny EHS.
Taorian'ny fitifirana ny faritra iray manontolo nanodidina ny seranam-piaramanidina Vancouver dia nisokatra indray ny seranam-piaramanidina tamin'ny lalana 4 hariva ary nivily nankany amin'ny seranam-piaramanidina indray ny Canada Line.
Fanenjehana iray no ho avy hahita ilay nitifitra nampihorohoro ny seranam-piaramanidina BC androany.
Nilaza ny seranam-piaramanidina tamin'ny fanambarana tao amin'ny Twitter fa miara-miasa amin'ny RCMP izy hamaly ny tranga iray nitranga tany ivelan'ny terminal lehibe.
YVR "misokatra sy azo antoka izao miaraka amin'ny fidirana voafetra", hoy ny sioka iray.
Rehefa nitady ireo ahiahiana izy ireo, ny polisy dia nanome baiko ny fanidiana “fidirana fidirana” mankany amin'ilay faritra, ka nahatonga ny fanidiana ireo gara Canada Line maro sy ireo làlambe marobe hiditra ao amin'ilay tanàna misy ny seranam-piaramanidina.
Ny polisy Metro Vancouver Transit dia nilaza tamin'ny CTV News fa mitandrina ny fanidiana ny SkyTrain ary nametraka fanontaniana tamin'io tranga io tany amin'ny RCMP mihitsy.
Ny Massey Tunnel sy ireo làlana lehibe hafa mankamin'ny Richmond dia nakatona ihany koa noho ny lozam-pifamoivoizana nataon'ny polisy ny alahady tolakandro teo, hoy ny DriveBC.